वृहत खानेपानी आयोजना अलपत्र, मजदुरले ज्याला समेत नपाएको गुनासो - Arthatantra.com
वृहत खानेपानी आयोजना अलपत्र, मजदुरले ज्याला समेत नपाएको गुनासो
बैतडी । बैतडीको पुर्चौडी हाटस्थित बसन्तपुर तथा खडिखेत बजारमा तीन बर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरू गरेको वृहत खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । उपभोक्ता समितिको लापर्वाहीका कारण आयोजना निर्माण अलपत्र बन्दा यहाँको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ ।
वृहत खानेपानी आयोजना बारे उपभोक्ता समिति जिम्मेवार नबन्दा योजना अलपत्र परेको एमाले नेतासमेत रहेका स्थानीय कर्णबहादुर कुँवरले बताए । उनले भने, ‘हाट वृहत खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेगरी बनेको उपभोक्ता समिति नै गलत भयो । खानेपानीको धेरै जरुरत हाटमा क्षेत्रमा छ । तर, खानेपानीको उपभोक्ता नै नभएका वडा-७ का व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइयो । अर्को ठाउँको व्यक्तिलाई यहाँको समस्याबारे के मतलब ?
अहिलेसम्म ट्यांकीको नाममा पिल्लर मात्रै ठड्याएको छ । त्यो पनि जिर्ण भै भइसकेको छ । केही ठाउँमा पाइप जडान गरिएको भए पुराना भइसकेका छन्प । केही पाइप त चोरी भैसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
पुर्चौडी नगरपालिकाकै मुख्य बजारका रुपमा रहेको बसन्तपुर तथा खडीखेत बजार नजिकै त्रिवेणी नदी छ । बजारको फोहोर यही नदीमा फालिदै आएका छन् । तर, कुनै सभा समारोह हुँदा तथा मेला लाग्दा अस्थाइ पसलेहरूले यही फोहोर नदीको पानीलाई खानेपानीका रुपमा प्रयोग गर्छन् ।
नगरपालिकाकी उपमेयर जानकी ऐर बमका अनुसार खानेपानी आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूले समेत ज्याला पाएका छैनन् । यहाँका महिलाले बिहान रोटी मात्रै खाएर दिनभर काम गरेका हामीले देखेका छौ‌ उनले भनिन्, तर सुको ज्याला पाएका छैनन् । यस बिषयमा पोहोर मैले खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखसँग कुरा गरेँ र उहाँ आफै यता आएर काम सञ्चालन गर्नुभयो । तर उक्त काम एक महिना पनि चलेन् । अहिले नयाँ समिति बनाएर काम सञ्चालन गर्न भनि ताकेता गरेको उनले बताइन । एउटाले बिगारेको काममा अब कसले हात हाल्छ ? उनले भनिन् पानीको मुहान कोटिला र बढी उपभोक्ताहरु रहेको हाटका मानिस भेला गराई हरहिसाब बुझाएर नयाँ समिति बनाएर काम गर्नुको विकल्प छैन् ।’ विगतमा पाँच जना कोठामा बसेर समिति बनाएकाले यो समस्या आएको उपप्रमुख बमको भनाइ छ ।
वि.सं.२०७८ पुस ६ मंगलवार १६:३३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे ऐतिहासिक गढी संरक्षणमा विभाग र लिम्बू समुदायको चासो
पछिल्लाे नेपाल लाइफद्धारा नम्बर वान इन्स्योरेन्स कम्पनीको दाबि